Ingabe ukuhlelwa kwezinto eziphilayo kubalulekile?
Uma ususebenze ne-Google Analytics, cishe uyazi ukuthi kukhona imithombo emine yemigwaqo emikhulu - okuphilayo (ukusesha), ukudluliselwa emuva, ukuhlalisana nokukhokhelwa. Ungathola ithrafikhi kusukela eziteshini zokuxhumana zenhlalo kanye nokukhangisa okukhokhelwe, kodwa izikhundla zakho ngeke ziphakame njengento ehamba phambili yokubambisana kwewebhu, futhi ukuhlelwa kwe-SEO-ubungane obuhamba phambili bezithuthi zomphakathi.
Namuhla, siphila ezweni elishintshayo futhi elihlukahlukene lapho abantu bathola khona izindlela eziningi ekusetshenzisweni kokusesha okuphilayo. Sisebenzisa ukukhangisa nge-pay-per-click, ukudala ubunikazi kumapulatifomu omphakathi futhi sikhuthaze imikhiqizo yethu namasevisi ngokusebenzisa iziteshi zenhlalo yomphakathi. Abanikazi bewebhusayithi abasahlali baphinde bafe ngokubekwa kwewebhusayithi yabo ku-Google, bekhohlwa ukuthi kubaluleka kokubaluleka kokubaluleka kwezikhundla zabo. Kodwa-ke, izimoto ezihamba phambili ziqhubeka zendima ebaluleke kakhulu ekuthuthukiseni i-rankings. Ngokusho kwedatha yemininingwane, ukusesha okuphilayo kuqhuma ezinye izakhi zomshuwalense, ukushayela cishe ama-51% kuwo wonke amaklayenti angaba khona kumabhizinisi amabili e-B2B ne-B2C.
Ingabe usadinga ukusesha okuhleliwe kwezinto eziphilayo?
Ukuqhuba ukucinga kokusebenza kohlobo kuyindlela kuphela yokuheha ithrekhi yosesho lwekhwalithi. I-Organic imane nje engcono kakhulu yokuletha ithrafikhi efanele. Umzila owodwa ongakulethela cishe umphumela omuhle ukhokha izikhangiso zosesho. Noma kunjalo, ukusesha okukhokhelwayo kuphela kubalwe u-10% we-traffic yonke yenani. Iningi le-SEO gurus icebisa ukutshala imali kokubili kwezinto eziphilayo kanye nezinkokhelo zokukhokha ukuze uthole ukubuyiswa okukhulu ekutshalweni. Isibonelo, embonini yezobuchwepheshe nezokwelapha, indlela ehlanganisiwe enjalo yenza okungaphezu kwezingxenye ezimbili kwezintathu zemali engenayo.
Kukhona ukuthambekela okukodwa kwesimanje ukuheha imoto ngokusebenzisa iziteshi zenhlalo yomphakathi. Ungathola amaphesenti angama-40 kuya kwangu-60 we-traffic yakho kusuka ku-Facebook naku-Instagram, kodwa ungaboni noma yikuphi ukuthuthukiswa kwewebhu kuwebhusayithi. Lesi simo singachazwa ngesibonakaliso esincane salolu hlobo lwezimoto ezizeni zokusesha. I-traffic yomphakathi ingaba umthombo wethrafikhi owengeziwe kodwa hhayi oholayo. Ngaphezu kwalokho, uma usungula iziteshi zokuxhumana zenhlalo ukuze uthole indawo yesitoreji, unesihawu saloluhlelo lwezenhlalo. Kusho ukuthi uzodinga ukukhokha isikhathi ngasinye isiteji sezokuxhumana senhlalo sinquma ukushintsha imithetho yayo ye-akhawunti yebhizinisi. Ungasho ukuthi isimo esifanayo singenzeka nge-Google search search engine. Ngingasho ukuthi kuncike. Yiqiniso, izikhundla zakho zingaphinda ziwe ngenxa yokushintsha kwe-algorithm. Kodwa-ke, esimweni sokusungulwa kohlobo lwezinto eziphilayo, cishe ngeke kwenzeke nawe, futhi noma ngabe kunjalo, uzothola izikhundla zakho emuva kwesikhathi esifushane.
Amathiphu we-Organic SEO
Qinisekisa ukuthi unama-URL afanelekile futhi aqondile. Lungiselela ama-URL akho afaka phakathi kwamagama angukhiye amaningi okuthola ithrafikhi esakhiweni sabo.
Kudingeka ube nokulinganisela okunempilo kwamagama angukhiye kuwo wonke okuqukethwe kwakho kuwebhusayithi. Ungasebenzisi amagama angukhiye amaningi ekhasini elilodwa. Inani elilinganiselwe yimigomo emithathu yokusesha ngekhasi elilodwa. Qinisekisa ukuthi ufaka amagama angukhiye afanele ngezihloko, imisho yezimali kanye naphezulu kwesigaba.
Sebenzisa amakholi ezenzweni ukuze uheha abasebenzisi abaningi kusuka kusesho. Qinisekisa ukuthi iwebhusayithi yakho icela izivakashi zakho ukwenza ezinye izenzo. Isibonelo, "Thenga manje," "Hlela ngokuchofoza okukodwa" noma "Thola i-quote yamahhala namhlanje. "I-CTA iyindlela yokugqugquzela engokwemvelo ethatha amakhasimende akho ngokuchofoza okukodwa kwisayithi lakho Source .